Nnukwu Cartel: Ecommerce maka ndị omenkà | Martech Zone
Sunday, Jenụwarị 26, 2014 Sunday, Jenụwarị 26, 2014 Douglas Karr
Tọrọ ntọala na 2005 iji nyere onye na-ahụ maka ngalaba aka ire ngwa ahịa ya, Nnukwu Cartel ugbu a bụ ebe obibi maka ndị na-ese ihe nwere onwe ha 400,000 n'ụwa niile. A na-ewu usoro ikpo okwu ecommerce ha iji nyere ndị okike aka inweta ngwaahịa ha n'ịntanetị. Nke a bụ vidiyo si n'aka otu n'ime ndị ahịa ha, Ogologo Ogologo Ndu Ahụ, onye na-ese uwe.
Nnukwu Cartel na-enye uru na atụmatụ ndị a:
Nhazi ngwa ngwa - Nweta ụlọ ahịa dị mfe na ntanetị na nkeji.
Mfe iji - ha na-enye ikpo okwu dị mfe nke dị mfe iji.
Ndị azụmahịa - ịkọ akụkọ na nhazi njikwa.
Dịka - Mfe iji nweta ọfụma na - enweghị koodu chọrọ. Ọrụ nwere ike họrọ tupu mere gburugburu na mfe hazie ihe oyiyi, na agba, na Akara ókwú.
Ngalaba omenala - Jiri ngalaba ọ bụla i nwere iji nye ụlọ ahịa gị omenala URL.
Jikwaa usoros - mpaghara nhazi njikwa na ịnye ozi ịntanetị ị nwere ike hazie.
Search engine kachasị - ụlọ ahịa kachasị maka engines ọchụchọ, dabere na ndụmọdụ Google.
Nchịkọta na nchịkọta - nyochaa ọrụ ụlọ ahịa na uto ya na ezigbo oge dashboard na nchịkọta Google Analytics.
Koodu ego - Koodu ego na enye otutu uzo iji zie ahia ohuru, kwalite ulo ahia gi, ma nye ndi ahia kwesiri ntukwasi obi.
Digital ngwaahịa - ree ahia dijitalụ, egwu, vidiyo, Akara ókwú, foto, akwụkwọ eBooks, yana ngwaahịa ndị ọzọ enwere ike ibudata na ọrụ nwanne anyị nwanyị, Pulley.
Ree na Facebook - Tinye ụlọ ahịa gị na ibe Facebook ọ bụla ma jikọọ ndị Fans gị na ngwaahịa gị site na ngwa ngwa Facebook anyị na-enweghị atụ.
Ekwentị ọpụpụ - ere gị ibu ozugbo gị iPhone na Ngwa Big Cartel.
Tags: nnukwu carteldijitalụ download ụlọ ahịaecommerceecommerce maka ndị na-ese ihepulleyree nka na ntanetịree ejiji na ntanetị
5 Mkpebi Azụmaahịa Onlinentanetị Maka 2014